सादा कागजमा के लेखेको छ सरकार ? |सादा कागजमा के लेखेको छ सरकार ? – हिपमत
सादा कागजमा के लेखेको छ सरकार ?
प्रधानमन्त्रीमा आफ्ना एजेण्डा संसदीय दलबाट सहर्ष स्वीकार्य हुने अटल विश्वास किन भएको होला ?
किनभने,त्यहाँ पनि उही घाटको पानी खाएका नेता न सांसद छन् ! तर, प्रधानमन्त्रीका निम्ति पार्टीका सचिवालय,स्थायी कमिटीहरु भन्दा संसदीय दल प्यारो रहँदै आएको छ । जनआस्थाले प्रममा मौलाएको यो विश्वासको खोजी गर्यो ।
प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई थाहा छैन, सम्पूर्ण पूर्वएमाले सांसदले चार–चारवटा सादा पानामा हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलमा बुझाएका छन् । यो काम संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र राष्ट्रियसभाका सचेतक खिमलाल भट्टराईबाट भयो । तर, शायद, आजसम्म प्रमुख सचेतक यसबारे जानकार छैनन् । जनआस्थाले करिव आधा दर्जन पूर्वएमाले तर्फका सांसदलाई सोध्यो, सबैले ‘हो’ भनेका छन् ।
अनि,सादा कागजमा सही गरेर बुझाएपछि, त्यो पनि चार–चारवटा– को तर्सिदैन ? त्यो कागजको तलमाथि जेसुकै लेखियोस्,भोलि विवाद नै भएछ भने पनि हस्ताक्षर प्रमाणिकरणका वैज्ञानिक विधि अपनाइन्छ । हस्ताक्षरचाहिँ सबैले आ–आफ्नै हातले गरेका छन् । अनि, यति भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पूर्व दलमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था, पूर्वदलका अरु नेताले पार्टी बैठकमा बोलेका कुराको किन चिन्ता होला र ?